कहाँबाट आयो कक्षा ६ मा पढ्ने यि दुई बालकको खातामा करोडौँ भारु ? त्यो के गरे झनै रोचक ! « Gaunbeshi
काठमाडौं । जब तपाईंको खातामा अचानक करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन्छ के तपाई गर्नु हुन्छ रु यस्तै एक दुर्लभ घटना भारत, बिहारको खगेरियामा देखिएको छ । त्यहाँ एक युवकको खातामा गल्तीले ८ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै जम्मा भयो । त्यो मात्रै होईन सो रकम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको भन्दै हल्ला पनि फैलाइयो ।